Sithenga esetshenziswa Mitsubishi-Pajero-Sport nge-mileage - yini okufanele siyibheke?
Abashayeli abaningi baseRussia bakholelwa ukuthi izici ze-Japanese SUV "Mitsubishi-Pajero-Sport" yezintambo zithuthuka kakhulu, kodwa akunjalo. Eqinisweni, isiqalo esithi "Sport" sithi imoto iklasi elingezansi ejwayelekile "i-Pajero". Lokhu kuboniswa izindleko zayo ezincishisiwe. Okwamanje, le moto iyathandwa kakhulu endaweni ye-post-Soviet, futhi emigwaqweni ungathola ngisho namamodeli ezineminyaka engu-20 ubudala. Izindleko zazo ziyizilingo, futhi ikhwalithi yaseJapane ayikhala isikhalazo. Kodwa yilokho okumele ubheke uma uthenga i-Mitsubishi Pajero Sport esetshenziswe ngokuhamba kwamakhilomitha angaba ngu-100 000? Impendulo yalo mbuzo oyothola kulesi sihloko.
Uma kwenzeka ukuthi imoto yomlando wonke wokusebenza ingakaze ihlanganyele ezingozini zomgwaqo, umnikazi wesikhathi esizayo angeke akhathazeke ngesimo somzimba. Ikakhulukazi kufanelekile ukunaka i-Mitsubishi Pajero-Sport nge-run ekhishwe ngawo-1990. Lesi sizukulwane sezimoto sinembala enamandla kakhulu, ephindaphindiwe eqinisekisile impendulo yabanikazi. Ngisho noma kukhona ukukhanya okuncane emzimbeni, namanje i-SUV enjalo iyovikeleka ekubhubhiseni, ngoba insimbi inamandla kakhulu futhi imelana nokugqwala. Nakuba kungcono ukuthi uphephe futhi uvikeleke kakhulu indawo ewonakele - ngakho umzimba we "subcompact" wakho uyobe ungenakuvinjelwa amanzi.
Uma sikhuluma nge-Mitsubishi-Pajero-Sport nge-mileage ka-150-200 eyizinkulungwane kanye neminyaka engama-5-6, khona-ke kumele umuntu aqaphele kakhulu. Isizukulwane se-SUV sika-2000 sinembala encane engokomfanekiso, futhi uma kungenayo i-rust eyodwa emzimbeni, qiniseka ukuthi imoto enjalo ivuselelwe.
Yikuphi ukwesaba okungafihlwa ngaphansi kwehotho?
Ngokuvamile izimoto ezingekho emgwaqweni emakethe yaseRussia zaqedwa ngamagines amabili. Phakathi kwabo, injini yephethiloli engu-3 litre kanye ne-2.5-litre turbodiesel. Uma unikezwa ngamanye amayunithi, okungukuthi injini enekhono lamahhashi angu-197 kanye nomthamo wamamitha angu-3 500 cubic, uyazi, lokhu akuyona "Japanese" yangempela, kodwa umlingani wakhe waseMelika ogama lakhe lingu "Montero." Isitshalo esinjalo sinokwethenjelwa kakhulu kunezinjini zangempela zaseJapane. Ngendlela, ungakwazi ukuhlangabezana nekhophi enjalo emigwaqweni yethu kaningi. Futhi akunandaba ukuthi uthenge i-Mitsubishi Pajero Sport - eMoscow noma eYekaterinburg.
Ukumiswa kanye ne-chassis
I gear egijima ye-SUV inokwethenjelwa kakhulu, kodwa ayikwazi ukubizwa ngokuthi ijwayelekile. Isibonelo, ukuvimbela okuthulile kuzohluleka zonke amakhilomitha ayizinkulungwane ezingu-80, ngakho-ke uma uthenga i-Mitsubishi-Pajero-Sport ngokugijima, lungele izindleko ezingalindelekile. Ngokuqondene nokumiswa, kwakuyi-spring-ilayishwa kuze kube ngu-2000, ngemva kwalokho abanikazi bezenzele indawo enhlobonhlobo. Kunoma yikuphi, uma izingxenye zombili zombili zinyenyekile, izindleko zokuzifaka kuzo zizoba zibi kakhulu. Qinisekisa impilo ngqo yamithombo ukuthi akunakwenzeka, kodwa qiniseka - uma uthenga i-Mitsubishi Pajero Sport ngokugijima kwamakhilomitha angu-200-250, ukumiswa kungekudala ukucela ukulungiswa.
Ukuchaza umqondo, isakhiwo kanye nezinhlobo ubudlelwano emndenini
Ubuchwepheshe okusha - Isidingo of Awa
Uqweqwe eMhlabeni: isakhiwo nezinhlobo
Sberbank ikhomishana cash Ukuzihoxisa kanye nezinye izinsizakalo zokusebenza
Uhlolojikelele smartphone Highscreen Pure F: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Uyini umsebenzi? umsebenzi izinhlobo. Izinhlobo futhi izigaba ibhizinisi umsebenzi
Bender robot. uhlamvu Mangalisayo yochungechunge animated "Futurama". Biography, ubuntu.
Isibilini esikhulu. Izizathu nezixazululo